We Fight We Win. -- " More than Media ": လမ်းဘေးဒါဏ်ရာဖြင့်လဲနေသော ကလေးငယ်ကို ကူညီရန် ဗဟန်းရဲစခန်းကရဲအရာရှိမှ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းငြင်း။
တော်တော်ရုပ်မာတဲ့ ရဲတွေဘဲ ငွေမရတဲ့အလုပ်
Don't say Budddhism country.
Killing monk, brake tample...
No kiness, how to living this country
ဒါများ (မြန်မာပြည်မှာ) ဒါ ရဲအလုပ်မှမဟုတ်တာ... နောက်တခုထူးဆန်းတာက ဘာသာစကားသာကွာပေမယ့် ကျုပ်ရောက်ဘူးသမျှနိုင်ငံက ပြည်သူအများစုက ရဲကို ခွေးဘဲခေါ်ကြတယ်
All I can say is social norm in Burma need to change. It is reminding of me of chinese little girl mowing down by truck and no one near by go and help. Will Burmese people behave like Chinese people? Just because you don't like them try not to behave like them. May peace with Burmese people.